SSP Actinidia waa panulirus ah Actinidia Lindl, taas oo uu leeyahay 66 nooc oo kiwifruit iyo 62 noocyada ee Shiinaha. "Pujiang kiwi" by muujinaya summad juquraafi, taas oo ah calaamadaha Pujiang ugu. Pujiang County, Gobolka Sichuan, oo ku yaalla loolka 30 digrii loolka woqooyi, waa kiwi dunida laga aqoonsan yahay meesha ugu wanaagsan ee la beero, xaaladaha deegaanka dabiiciga ah u fiican, noocyo kala duwan oo qani ku ah khayraadka, saldhig suuqa waa wanaagsan yahay. Gobolka Sichuan, sida mid ka mid ah xarumaha qaybinta kiwi duurjoogta ah ee Shiinaha, waa t ...
SSP Actinidia waa panulirus ah Actinidia Lindl, taas oo uu leeyahay 66 nooc oo kiwifruit iyo 62 noocyada ee Shiinaha. "Pujiang kiwi" by muujinaya summad juquraafi, taas oo ah calaamadaha Pujiang ugu. Pujiang County, Gobolka Sichuan, oo ku yaalla loolka 30 digrii loolka woqooyi, waa kiwi dunida laga aqoonsan yahay meesha ugu wanaagsan ee la beero, xaaladaha deegaanka dabiiciga ah u fiican, noocyo kala duwan oo qani ku ah khayraadka, saldhig suuqa waa wanaagsan yahay.
Gobolka Sichuan, sida mid ka mid ah xarumaha qaybinta kiwi duurjoogta ah ee Shiinaha, waa gobolka ugu badan ee khayraadka germplasm kiwi duurjoogta ah iyo kaydka. Natiijooyinku waxay muujiyeen in ay jiraan 25 noocyada (oo ay ku jirto kala duwanaansho iyo kala duwanaansho) ee Actinidia Gobolka Sichuan.
Pujiang County waxa uu ku yaalaa ku laayeen koonfur Chengdu Bannaanka, inta u dhaxaysa 103 darajo oo 103 daqiiqo dhigaha bari iyo ilaa 41 digrii 41 daqiiqo, loolka 30 degrees 5 daqiiqo ilaa 30 digrii 21 daqiiqo. Waxyaabaha ilaa 37 km dheer, waqooyiga iyo koonfurta ubalaadhan 27.5 km, iyadoo meel tirada guud ee 582,86 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Sannadkii 2005, ilaa ay dadka gobolka in ay 2575 oo qof, 22,37 million mu dalkii layaal. Pujiang County, heerkulka celceliska sannadlaha ah ee 16.3 ℃, Pingba, hills, buurta la dhul ah, xagaaga si tartiib tartiib ah u gaabshay, jiilaalka si tartiib ah kor u kacay; qeybaha hoose ee labada webi aagga Shou'an ee aagga xagaaga ugu dheer, aagga buurta Changqiu jiilaalka dheer. Celceliska heerkulka waa inta u dhaxaysa 17.9 iyo 18.2 ℃, taas oo uu ka badan yahay heerkulka sanadlaha celcelis ahaan 1.6 ~ 1.9 ℃. Celceliska heerkulka waa inta u dhaxaysa 17.9 iyo 18.2 ℃, iyo heerkulka celceliska sannadlaha ah waa 1.6 ~ 1.9 ℃. roobab sanadlaha celcelis ahaan maalin kasta of 85%, marka laga reebo ugu hooseeya ee May 79%, bilaha ka dhiman yihiin in ka badan 80%, inta badan koonfur-galbeed iyo waqooyi-bari dabaysha.
Kiwi uu qiimo sare nafaqada, content vitamin C, Waa wax sare, oo loo yaqaan "oo ahaa boqorkii dalka midhaha", qiimaha dhaqaale waa mid aad u sarreeya. On October 27, 2010, Summit Kiwi danbow Caalamiga ah ee lagu qabtay Pujiang County, Chengdu. Xafladdii furitaanka, "Pujiang kiwi" si rasmi ah heli wax soo saarka qaranka ee ilaalinta tilmaan juquraafi in. Pujiang County waa mid ka mid ah saddex ugu weyn ee ka leexsan kiwi kiwi jaalaha ah ee adduunka ee, Pujiang County, cimilada khafiif ah, roobab badan, ciidda bacrin ah, waxaa loo aqoonsan yahay meesha ugu fiican kiwifruit ku haboon beerashada, waa mudaaharaad kiwi qaranka aagga bandhig standard, tayada iyo ammaanka kiwi dhoofinta a degaanka, Ma saddex kiwi huruud ah beerashada kiwifruit of mid ka mid ah oo cas dhif dunida ee, jaalle ah, cagaaran "saddex-midab wada" asal ahaan kiwi dunida ee. 2010 "Pujiang kiwi" la qaab midho qurux badan, oo caraf udgoon hodan, dhadhanka macaan oo dhanaan, dhadhan gaar ah, sifooyinka nafaqo-hodanka ah loo aqoonsaday waxyaabaha qaran ilaalinta muujinaya juquraafi, sanadkii 2011 muujinaya juquraafi si guul diiwaan sumadda shahaado. Pujiang saddex walaalo Pujiang kiwi saddex walaalo ah, waxaa loola jeedaa in midhaha kiwi Pujiang miro hurdi ah, miro cagaaran, oo cas nuts, iyagoo hodanna ee Victoria C, loo yaqaan "King of Victoria C".
"Model Pujiang" waa Pujiang in la xoojiyo tayada iyo ammaanka ee beeraha kormeerka ammaanka badeecada, iyo kor u qaado horumarka warshadaha, horumar waara ee model-dhaqanka cusub, waa isku darka of xaaladda gobolka waafaqsan shuruudaha maxalliga ah, shaqo adag in guulaha fiican ka muuqataa . dhaqanka cusub Pujiang ayaa iftiimisay. Dowladda hoggaaminayo, xirid wasaaradda, kiwi "ammaanka carrabka" si ay u gaaraan kormeer buuxa.
Samaynta koox horumarinta shaqada, habka masuuliyadda bartilmaameedka iyo nidaamka xisaabtanka, farsamo ilaalinta maalgelinta, si wax ku ool ah ayaa nidaaminaya ah beerista dhirta kiwi, processing, wareegga, isticmaalka iyo si suuqa beeraha, si ay u gaaraan shaqada sharciyeed ka dadban in maamulka iyo ilaha caadiga ah maamulka badala dhaliyaha The in ay tallaabo qaranka, kiwi "-soo-saarka caadiga ah" si ay u gaaraan xawaaraha midaysan.
Ku tiirsan faa'iidooyinka qaybinta Lenovo ee caalamiga ah, abuuritaanka "oggolaansho brand midaysan, midaysan heerarka beeraha, midaysan sahayda beeraha, mideysan oo ay gacanta ku soo saarka oo dhan, underwriting midaysan, midaysan maalgelinta gargaarka" "lix midaysan" mode beerto silsilad, siin play buuxda u gobolka hormoodka shirkadaha, ururada, doorka hay'adda, si wax ku ool hubinta kiwi Pujiang tayada gaar ah oo tayo leh iyo ammaanka.
Suuqa-u janjeedha, brand-horseeday, kiwi "seddex ka mid ah ku xirid ah" si ay u gaaraan wax soo saarka iyo iibka dhacyaan. Pujiang marayo fulinta ee "heerka wax soo saarka, wax soo saarka leeyihiin calaamado, baaritaanka tayada, nidaamka shahaado, kormeerka suuqa," nidaamka oo dhan wax soo saarka caadiga ah, heerka miro kiwi, heerka miro fiican oo ah 95%, 90% ama in ka badan, iyada oo Maamulka Guud ee kormeerka tayada qaranka "dhoofinta saldhig bandhig" aqbalo, midho kiwi iibiyey Europe, Russia, in ka badan 20 dal iyo gobollada. In 2014, kiwi gobolka saarka guud ee 39,78 million kg, koror ah 964 milyan oo kiilo, qiimaha wax soo saarka ee 478,2 million yuan ah, koror of 28,62 million yuan, agglomeration Warshadaha, kor loogu qaado tayada shaqo, kiwi "ciidda dhibic galay oo dahab ah."
Pujiang ayaa dhisay xarunta ugu weyn oo ugu horumarsan Baakadaha kiwifruit iyo kaydinta, waa in la dedejiyo dhismaha meel ka mid ah in ka badan 300 acres of suuqa jumlada midho kiwi, kiwi dhisay cusub maktabadda qaboojiyaha 43, awoodda guud ee 40,000 tons, si wax ku ool ah ayaa nidaaminaya Supply suuqa midho kiwi ah; hordhaca ah ee suuq-geynta iyo processing shirkadaha ka badan 20, kiwi Pujiang kooxahaasi warshadaha waxaa si tartiib tartiib ah sameeyay.
Sanadihii la soo dhaafay, Pujiang County agagaarka goolka "dhisi heerarka caalamiga ah ee salka beeraha organic", ugu horeeyay ee dalka si kor loogu qaado dhismaha guud ee gobolka beeraha organic in "dhisi shan nidaamyada" sida horumar degdeg ah a, si aada kor kiwi oo tayo sare leh, shaaha, liinta, in baaqbaaq iyo balaadhinta shirkadaha keentay, ururka, beer qoyska "saddex ugu weyn", kabaallaynta kala duwan, oo tayo leh, brand "saddex wax soo saarka si kor loogu qaado", xaqiijinta ku ool ah oo warshadaha ee beeraha ka tirada ballaarinta si kor loogu qaado tayada isbadal iyo casriyeyn, oo ka mid ah u gaar ah Pujiang sifooyinka Jid cusub oo hal-abuurnimo beeraha casriga ah iyo dib u habaynta horumarinta.
Previous: liin fool xun
Shiinaha kiwi Fruit
Jin Yan Kiwifruit dhoofisaa
Jin Yan Kiwifruit qeybiye
Kiwi Waayo Sale
Miraha Kiwi Price
meesha laga gato Kiwi